Xiaomi ရဲ့ စီအီးအို Lei Jun ဟာ နောက်ထွက်မယ့် Mi Band3ကို ၀တ်ဆင်ထားသလား ? – DigitalTimes.com.mm
949 Shares 188 Views
Xiaomi ရဲ့ မကြာခင်က ပြုလုပ်ခဲ့တဲ့ Black Shark Gaming Smartphone မိတ်ဆက်ပွဲမှာ စီအီးအို ဖြစ်သူ လီဂျွန်လည်း တက်ရောက်ခဲ့ပါတယ်။ စိတ်ဝင်စားစရာကောင်းတာက လီဂျွန်ရဲ့ လက်မှာ ၀တ်ဆင်ထားတဲ့ လက်ပတ်လေး ဖြစ်ပါတယ်။ အဲဒီ လက်ပတ်ဟာ Mi Band2လည်း မဟုတ်ပါဘူး။ သူ့ရဲ့ မျိုးဆက် Mi Band3ဖြစ်နိုင်ပါတယ်။
Huami Technology ရဲ့ စီအီးအို ဖြစ်သူက ဒီနှစ်ထဲမှာ Mi Band3ကို ရောင်းချမယ်လို့ အတည်ပြုဖူးပါတယ်။ လီဂျွန် ၀တ်ဆင်ထားတဲ့ လက်ပတ်ရဲ့ ဓါတ်ပုံများအရ Mi Band3ဟာ နောင်တော် Mi Band2နဲ့ ပုံသဏ္ဍာန် တူညီပေမယ့် ဒီဇိုင်းအပိုင်းမှာ အနည်းငယ် ပြောင်းလဲထားပါတယ်။ ဥပမာအားဖြင့် ဖန်မျက်နှာပြင်ကို လက်ပတ်ရဲ့ ဘေးဘက်ခြမ်းများအထိ တိုးချဲ့ထားပါတယ်။ အောက်ခြေနားမှာ လုံးဝန်းတဲ့ ခလုတ်တစ်ခုကိုလည်း မြင်တွေ့နေရပါတယ်။
Mi Band3ရဲ့ မျက်နှာပြင်ဟာ ယခင်မျိုးဆက်ထက် အနည်းငယ် ကြီးမားတဲ့ပုံပေါ်တဲ့အတွက် အရွယ်အစားအပိုင်းမှာလည်း အနည်းငယ် ကြီးမားနိုင်ပါတယ်။ Mi Band2လိုပဲ Mi Band3မှာ အလွန်သေးငယ်ပြီး စွမ်းအင် စားသုံးမှု နည်းပါးတဲ့ OLED Display တပ်ဆင်ထားနိုင်ပါတယ်။
Mi Band3ရဲ့ Specifications များဟာ ပေါက်ကြားထွက်ပေါ်ခြင်း မရှိသေးတဲ့အတွက် လာမယ့် လအနည်းငယ်ကျမှသာ သူ့ရဲ့ သတင်းအချက်အလက်များကို ပိုမို သိလာရနိုင်ပါတယ်။ သူ့မှာ Accelerometer, Vibration Engine, Optical Heart Rate Sensor , Bluetooth 4.2 LE Connectivity များ ပါလာနိုင်ပါတယ်။ ဒါ့အပြင် IP67 သို့မဟုတ် ရေစိုခံ စံနှုန်းတစ်ခု ထည့်ပေးထားနိုင်ပါတယ်။
Xiaomi ရဲ့ စီအီးအို Lei Jun ဟာ နောကျထှကျမယျ့ Mi Band3ကို ဝတျဆငျထားသလား ?
Xiaomi ရဲ့ မကွာခငျက ပွုလုပျခဲ့တဲ့ Black Shark Gaming Smartphone မိတျဆကျပှဲမှာ စီအီးအို ဖွဈသူ လီဂြှနျလညျး တကျရောကျခဲ့ပါတယျ။ စိတျဝငျစားစရာကောငျးတာက လီဂြှနျရဲ့ လကျမှာ ဝတျဆငျထားတဲ့ လကျပတျလေး ဖွဈပါတယျ။ အဲဒီ လကျပတျဟာ Mi Band2လညျး မဟုတျပါဘူး။ သူ့ရဲ့ မြိုးဆကျ Mi Band3ဖွဈနိုငျပါတယျ။
Huami Technology ရဲ့ စီအီးအို ဖွဈသူက ဒီနှဈထဲမှာ Mi Band3ကို ရောငျးခမြယျလို့ အတညျပွုဖူးပါတယျ။ လီဂြှနျ ဝတျဆငျထားတဲ့ လကျပတျရဲ့ ဓါတျပုံမြားအရ Mi Band3ဟာ နောငျတျော Mi Band2နဲ့ ပုံသဏ်ဍာနျ တူညီပမေယျ့ ဒီဇိုငျးအပိုငျးမှာ အနညျးငယျ ပွောငျးလဲထားပါတယျ။ ဥပမာအားဖွငျ့ ဖနျမကျြနှာပွငျကို လကျပတျရဲ့ ဘေးဘကျခွမျးမြားအထိ တိုးခြဲ့ထားပါတယျ။ အောကျခွနေားမှာ လုံးဝနျးတဲ့ ခလုတျတဈခုကိုလညျး မွငျတှနေ့ရေပါတယျ။
Mi Band3ရဲ့ မကျြနှာပွငျဟာ ယခငျမြိုးဆကျထကျ အနညျးငယျ ကွီးမားတဲ့ပုံပျေါတဲ့အတှကျ အရှယျအစားအပိုငျးမှာလညျး အနညျးငယျ ကွီးမားနိုငျပါတယျ။ Mi Band2လိုပဲ Mi Band3မှာ အလှနျသေးငယျပွီး စှမျးအငျ စားသုံးမှု နညျးပါးတဲ့ OLED Display တပျဆငျထားနိုငျပါတယျ။
Mi Band3ရဲ့ Specifications မြားဟာ ပေါကျကွားထှကျပျေါခွငျး မရှိသေးတဲ့အတှကျ လာမယျ့ လအနညျးငယျကမြှသာ သူ့ရဲ့ သတငျးအခကျြအလကျမြားကို ပိုမို သိလာရနိုငျပါတယျ။ သူ့မှာ Accelerometer, Vibration Engine, Optical Heart Rate Sensor , Bluetooth 4.2 LE Connectivity မြား ပါလာနိုငျပါတယျ။ ဒါ့အပွငျ IP67 သို့မဟုတျ ရစေိုခံ စံနှုနျးတဈခု ထညျ့ပေးထားနိုငျပါတယျ။